Gumiguru 28 @ 9:30 am - 2: 00 pm
Cognos Performance Optimization Musangano
Sekutevera kune yakabudirira yekuvandudza mashopu, IBM + Motio vatanga iyo yechipiri nhevedzano ye Performance Optimization Workshops. Iko mashandiro emapuratifomu eAnalytics akakosha kumasangano anotungamirwa nedata. Zvikwata zveBI zvinoda kugadzirisa nyaya pamberi peCognos kuita kusashata. Munguva yemusangano uyu, isu tichaenda pamusoro peakanakisa ekugadzirwa kweCognos uye marongero ehurongwa. […]
Mbudzi 18 @ 9:30 am - 2: 00 pm
Cognos Performance Optimization Musangano - Europe
Sekutevera kune yakabudirira yekuvandudza mashopu, IBM + Motio yatanga iwo maviri akateedzana e Performance Optimization Workshops. Iko mashandiro emapuratifomu eAnalytics akakosha kumasangano anotungamirwa nedata. Zvikwata zveBI zvinoda kugadzirisa nyaya pamberi peCognos kuita kusashata. Munguva yemusangano uyu, isu tichaenda pamusoro peakanakisa ekugadzirwa kweCognos uye marongero ehurongwa. […]